Ụlọ ọrụ ihe nkiri ihe nkiri China na -ebugharị ya EVERGREEN
Akwadoro ya na akwụkwọ mpịakọta na nkọwapụta gị, enwere ike ịtụgharị ihe nkiri edere ka ọ bụrụ usoro nkwakọ ngwaahịa ọ bụla n'oge ụdị, jupụta na usoro akara.
Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa a na -emegharị emegharị, anyị na -ebu ihe nkiri mpịakọta dịka nkọwa gị siri dị. Ihe nkiri a na -ebipụta nwere ike na -agba ọsọ dị elu ma na -aga nke ọma na mpempe akwụkwọ jupụta vetikal (VFFS) na igwe na -ejuputa mpempe akwụkwọ (HFFS). Mgbe mpịachi, jupụta na akara, enwere ike ịme ihe nkiri mpịakọta n'ụdị akpa ọ bụla. A na-ejikarị ya eme ihe na obere ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, yanakwa nhọrọ kacha arụ ọrụ nke ọma.
Ihe nkiri anyị na -emegharị emegharị emegharị na -emejupụta mpempe akwụkwọ mejupụta vetikal (VFFS) na akara ndochi ụdị (HFFS). Enwere ike tinye teknụzụ teknụzụ laser na ngwaahịa gị emechara ka ị rịọ.
Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa a na-emegharị emegharị na-eji ihe eji emegharị emegharị nke na-enye usoro njedebe nke ndụ kacha arụ ọrụ nke ọma ka ị na-echekwa ogo ndụ. Anyị nwere ike bipụta ihe ruru agba iri na rotogravure. Site na ahụmịhe teknụzụ afọ ole na ole, anyị ghọtara na ọ dị mkpa itinye nkọwapụta kwesịrị ekwesị na igwe mkpuchi akara
> Ihe nkiri dabeere na polyethylene > Ihe nkiri dabeere na polypropylene
> Nnukwu nguzogide okpomọkụ maka ngwa dị elu/jupụta/mechie ngwa > Nguzogide dị elu karịa sterctures OPP maka ụdị ka mma/jupụta/mechie
> Ihe mgbochi mmiri ọkọlọtọ > Ezigbo mmiri mmiri, mmanụ ịnweta mmanụ na ihe mgbochi griiz
> Ejiri varnish nchedo n'elu ebipụta ya > Nweghachi azu ma ọ bụ elu ebipụtara
> Ndị tozuru oke maka mbupu ụlọ ahịa recyclable na nkwado nkwakọ ngwaahịa nkwado How®Recycle® polyethylenefilm iyi >> Onye tozuru oke maka mbupu ụlọ ahịa recyclable na nkwado nkwakọ ngwaahịa nkwado How®Recycle® polyethylenefilm iyi
Arụmọrụ Ngwaahịa Iwu Ngwa
Akara Ike Alụlụụ mmiri Ọnụ nnyefe
EPP-ILM-STSt. > 25N/15mm (akara mkpọchi) <30g / m2 / ụbọchị (90.0(ihe nkiri) Ọkọlọtọ mgbochi <500CC / m2 / (90.0(ihe nkiri) Ọkọlọtọ mgbochi ● ● ●
EPP-ILM-HBS > 30N/15mm (akara mkpọchi) <3g / m2 / ụbọchị (90.0(ihe nkiri) Ọkọlọtọ mgbochi <1CC / m2 / (90.0(ihe nkiri) Ọkọlọtọ mgbochi ● ● ●
Nke gara aga: Ndị na -ezipụ ozi
Osote: Mpempe Gusset Akụkụ Recyclable